ဇီကာအဖျားရောဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဇီကာအဖျားရောဂါကြောင့် အနီကွက်များ ထနေစဉ်
ဇီကာအဖျားရောဂါ (အင်္ဂလိပ်: Zika fever) သည် Flavivirus အမျိုးအစားဝင်ဖြစ်သော ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် အဖျားရောဂါတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည် အခြား Flavivirus များကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ သို့မဟုတ် ချီကွန်ဂန်ယာအဖျားရောဂါ တို့နှင့် ဆင်တူသည်။ သို့သော် မပြင်းထန်ပဲ လေးရက်မှ ခုနစ်ရက်အထိ ကြာတတ်သည်။ အချို့ (၆၀–၈၀%) တွင် ရောဂါလက္ခဏာမပြတတ်ပေ။ ဖြစ်ပွားသူတို့တွင် တွေ့ရှိရသည့် အဓိကရောဂါလက္ခဏာမှာ တငွေ့ငွေ့ဖျားခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ ယာယီအဆစ်နာခြင်း (အဓိကအားဖြင့် ခြေလက်များရှိ အဆစ်ငယ်များတွင် ဖြစ်သည်) နှင့် မျက်နှာအရေပြားတွင် အနီကွက်ထကာ ယားယံပြီး တစ်ကိုယ်လုံးသို့ ပြန့်သွားတတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာများမှာ မပြင်းထန်ပဲ ၂ ရက်မှ ၇ ရက်အထိသာ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တွင် ဤရောဂါသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ တဆင့် သန္ဓေသားကို ကူးစက်ကာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်အဖြစ် ဦးနှောက်မဖွံ့ဖြိုးသည့် ဦးခေါင်းသေးငယ်သည့်ရောဂါ microcephaly ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆထားကြသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သန္ဓေသားအပေါ် ဆိုးဆိုးရွားရွား အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သော ဖြစ်စဉ်နှစ်ရပ်တွင် ရေမွှာရည်အတွင်း၌ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကို တွေ့ရှိရမှုကြောင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် မွေးကင်းစ ဦးခေါင်းသေးငယ်သည့် ကလေးများအကြား ဆက်စပ်မှုကို သတိထားကြရန် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိုသန္ဓေသားနှစ်ဦးကို အာထရာဆောင်းဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် နှစ်ဦးစလုံးမှာ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းအချို့ ပျက်စီးမှုကြောင့် ဦးခေါင်းသေးငယ်နေကြောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ အထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကို ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကာ ဦးခေါင်းသေးငယ်သည့် ကလေးများ မွေးဖွားခဲ့မှု ဖြစ်စဉ် အနည်းဆုံး ၂,၄၀၀ ရှိခဲ့ပြီး ၂၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဘရာဇီးနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုခဲ့သည်။
၁ ရောဂါသွင်ပြင်နှင့် လက္ခဏာများ
ဇီကာအဖျားရောဂါတွင် အများဆုံးတွေ့ရှိရသည့် လက္ခဏာမှာ ဖျားခြင်း၊ အရေပြားတွင် အဖုအပိန့်များထွက်ခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း (မျက်စိနီခြင်း)၊ ကြွက်သားနှင့် အရိုးများ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ကာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် ချီကွန်ဂန်ယာအဖျားရောဂါ လက္ခဏာများနှင့် ဆင်တူသည်။ ခြင်ကိုက်ခံရပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရချိန်မှ ရောဂါလက္ခဏာပြသည့် အချိန်မှာ ရက်အနည်းငယ်မှ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ဖြစ်သည်။ ရောဂါသည် တစ်ပတ်ခန့်အထိ ကြာတတ်ကာ မပြင်းထန်သလို ဆေးရုံတက်ကုသရန်လည်း လိုအပ်လေ့မရှိပေ။ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုမှာ ရှားပါးဖြစ်စဉ် ဖြစ်သည်။
အပူပိုင်းဒေသတွင် အတွေ့ရများသည့် အေးဒီးစ်ခြင်ကိုက်ခံရမှ တဆင့် ရောဂါကူးစက်သည်။ တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ရပ်ကျွန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွင် ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သည့်ခြင်မှာ Aedes hensilli ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွင် Aedes polynesiensis ခြင်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ တဆင့်ကူးစက်မှု နှစ်ခုနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ သန္ဓေသားသို့ ကူးစက်မှုရှိကြောင်းလည်း အစီရင်ခံထားသည်။ အခြား flavivirus များနှင့် မတူသည်မှာ သွေးသွင်းခြင်းမှလည်း ကူးစက်နိုင်ခြေရှိသဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော နိုင်ငံများတွင် သွေးလှူရှင်များအား စစ်ဆေးရန် နည်းလမ်းများ ချမှတ်ထားကြသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဇီကာအဖျားရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်မည့် ကာကွယ်ဆေး မရှိသေးပဲ အမေရိကန် အမျိုးသားကျန်းမာရေးသိပ္ပံမှ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ ခြင်မှတဆင့် ကူးစက်ခြင်းကြောင့် ခြင်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ခြင်ကိုက်မခံရစေရန် နေထိုင်ခြင်းသည် ရောဂါထိန်းချုပ်ရာတွင် အရေးပါနေသည်။ အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုဌာနက အကြံပြုချက်များမှာ
လက်ရှည်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီရှည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်း၊
နေလောင်ခံဆေး အသုံးပြုသူများသည် နေလောင်ခံဆေး ခြောက်မှ အင်းဆက်ပိုးနှင်ဆေးကို လိမ်းကျံရန်၊
အင်းဆက်ပိုးနှင်ဆေးကို အသုံးပြုရာတွင် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာရန်နှင့် ကလေးငယ်များ၏ လက်၊ မျက်လုံးနှင့် ပါးစပ်တို့ဖြင့် မထိမိစေရန် သတိပြုရန်၊
ပြင်ပတွင် အိပ်စက်မည်ဆိုပါက ခြင်ထောင် အသုံးပြုရန်
ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှုအတွက် တိကျသည့် ကုသမှုနည်းလမ်း မရှိသေးပေ။ နာကျင်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းတို့ကို ဂရုပြု ကုသရန်သာ ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Musso, D.; Nilles, E.J.; Cao-Lormeau, V.-M. (2014).
↑ "Factsheet for health professionals". ecdc.europa.eu.
↑ Schnirring, Lisa (30 November 2015).
↑ "Ministério da Saúde divulga boletim epidemiológico".
↑ Oliveira Melo, A. S.; Malinger, G.; Ximenes, R.; Szejnfeld, P. O.; Alves Sampaio, S.; Bispo de Filippis, A. M. (1 January 2016).
↑ "MONITORAMENTO DOS CASOS DE MICROCEFALIAS NO BRASIL (Portuguese)" (PDF).
↑ Heang, V.; Yasuda, C.Y.; Sovann, L.; Haddow, A.D.; Travassos da Rosa, A.P.; Tesh, R.B.; Kasper, M.R. (February 2012).
↑ "Signs and Symptoms".
↑ Hayes, Edward B. "Zika Virus Outside Africa".
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ "WPRO | Zika virus". www.wpro.who.int.
↑ Gatherer, Derek; Kohl, Alain (18 December 2015).
↑ Franchini, M.; Velati, C. (November 2015).
↑ Fauci, Anthony S.; Morens, David M. (13 January 2016).
↑ "U.S. Launches 'Full-court Press' foraZika Vaccine".
↑ "Zika Virus in Central America—Watch—Level 1, Practice Usual Precautions—Travel Health Notices | Travelers' Health | CDC". wwwnc.cdc.gov.
Flaviviridae Genomes Archived 8 December 2015 at the Wayback Machine. database search results from the Viral Bioinformatics Resource Center
Virus Pathogen Database and Analysis Resource (ViPR): Flaviviridae Archived 19 September 2019 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇီကာအဖျားရောဂါ&oldid=623640" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။